COVID-19: Anyị niile nọkọ ọnụ, mana ụwa anaghị eme ka ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » COVID-19: Anyị niile nọkọ ọnụ, mana ụwa anaghị eme ka ya
Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Safety • Tourism • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye isi oche WHO na amụma COVID-19
Ọnụ ọgụgụ ọrịa COVID-19 e dekọrọ karịrị nde 200 n'izu gara aga, naanị ọnwa isii ka ọ gafesịrị nde 6. Na ọnụego a, ụwa nwere ike gafere nde 100 site na mbido afọ na-esote, onye isi Director nke Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kwuru.
N'agbanyeghị eziokwu na enwere ọgwụ mgbochi dị iche iche, ọnụ ọgụgụ ndị ọhụrụ na ọnwụ na -aga n'ihu na -arị elu gburugburu ụwa.
Ọnụ ọgụgụ Delta na-emetụta ọnụọgụ a karịsịa n'ihi njiri mara ya nke ukwuu.
Agbanyeghị na onye ọ bụla na -ekwukarị maka iru mgbochi anụ ụlọ, onye isi ngalaba na -ahụ maka ọgwụ mgbochi WHO kwuru na enweghị "nọmba anwansi".
Ọ gbakwụnyere na amụma dị n'okpuru ala ala na ọnụọgụ ndị a bụ n'ezie ihe efu na ihe ọ bụla ga -egbochi nje a ga -eme ihe siri ike.
Tedros kwuru, "Anyị niile nọkọtara ọnụ, mana ụwa anaghị eme ka ya."
Ọ kwara arịrị na agbanyeghị na enwere ọgwụ mgbochi dị iche iche, ọnụ ọgụgụ ndị ọhụrụ na ọnwụ na-aga n'ihu na-arị elu, ọkachasị na-emetụta ụdị Delta na njiri mara ya nke ukwuu.
Agbanyeghị na onye ọ bụla na -ekwukarị maka iru mgbochi igwe, Director nke World Health Organization Ngalaba na -ahụ maka ọgwụ mgbochi ọrịa, kwuru na onweghị "nọmba anwansi". Ọ kọwara, “Ọ metụtara n'ezie etu nje a na -ebunye. Kedu ihe na -eme na coronavirus… bụ na ka ụdị dị iche iche na -apụta ma na -ebufekwa ya nke ukwuu, ọ pụtara na ọ dị mkpa ka a gbaa ọgwụ mgbochi dị elu nke ndị mmadụ ka ha nwee ike nweta oke mgbochi anụ ụlọ. Nke a bụ mpaghara ejighị n'aka sayensị. ”
Dịka ọmụmaatụ, ọnya na -efe efe nke ukwuu nke na ihe dịka 95% nke ndị mmadụ ga -enwerịrị ihe mgbochi ma ọ bụ gbaa ọgwụ ka ọ ghara ịgbasa. Ọ bụ ezie na anyị nabatara kpamkpam ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-efe efe ruo n'ókè na dịka ọmụmaatụ na America a na-agba ọgwụ mgbochi ụmụaka mgbe ọ dị ọnwa 12, ịdị ọhụrụ nke COVID-19 na-eme ka ndị mmadụ bụrụ ndị enweghị isi ma ọ bụ ụjọ ma ọ bụ ha abụọ. Enwere ọtụtụ ndị na -atụkwasịghị obi na ejighị ha dị ka ezi ezì iji nwalee ịdị irè nke "ọgwụ mgbochi ọhụrụ a." Ka ọ dịgodị, ndị Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ụwa niile sitere na COVID-19 ruru 4,333,094 taa.
Maka ndị butere nje a, olile anya dị n'eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ WHO kwuru na a na-eme nyocha ọzọ na ọgwụgwọ maka COVID-19. Nnwale mba dị iche iche a na-enwetụbeghị mbụ akpọrọ Solidarity Plus ga-eleba anya n'ịdị irè ọgwụ ọhụrụ atọ na mba 3.